SOMALITALK - KHARTUUM
Liibaan Cabdi Cali
Maxamed Axmed Diiriye oo ah wiil uu dhalay Nabaddoon Axmed Diiriye oo dhawaan lagu xiray magaalada Muqdisho ayaa codsaday in xorriyaddiisii loosoo celiyo aabihii Axmed Diiriye oo uu sheegay in aanay wax war ah ka helin tan iyo markii xabsiga la dhigay 10-kii bishan aynu ku jirno ee Novembar xilli uu ku sugnaa guri uu ka daggan yahay magaalada Muqdisho.
Maxmed Axmed Diiriye oo haatan ku sugan magaalada Khartoum ee dalka sudan oo uu jaamacad ka dhigto,dhawaanna ka soo laabtay somalia waxa uu sheegay in Aabihiis markii la xiray loo kexeeyay dhanka madax tooyada ka dibna ay ka war heleen in loo gacan galiyay ciidammada Ethiopia,isagoo intaa raaciyay in ay warkeeda hayaa in nabaddoon Axmed Diiriye uu ku xiran yahay guriga Jen: Gabre oo ah madaxa ciidammada Ethiopia ee jooga Magaalada Muqdisho.
Maxamed Axmed Diiriye oo lagu naaneeso " Yabooh" waxa uu intaa raaciyay in xaaladda Caafimaad ee aabihii aysan wanaagsanayn,oo uu qabay cudurrada Sokorta iyo Dhiig karka,oo lagala tacaali jiray xilli kasta,iyadoo dhibtaana ay ugu sii darsantay xarigga loo gaytay oo aan suurto gal ka dhigayn in uu helo daryeel caafimaad.
waxa uu Yabooh ku eedeeyay Maxamed Dheere iyo rag kale oo aanu carrab baabin in ay iyagu ka dambeeyaan xariga aabihii oo uu sheegay in uusan siyaasad ku lug lahayn,sababta loo xirayna ay tahay mowqifka uu iska taagay duullaanka ay dalka soomaaliya ku qabsatay Ethiopia.
Waxa uuna ka codsaday cid kasta oo gacan ka gaysan karta sii daynta aabihii in ay arrintaa u istaagto isagoo si gaar ahna uga codsaday ra'iisul wasaaraha cusub ee maamulka Mbgatti Nuur cadde in uu howshiisa ugu horraysa ka bilaabo sii daynta Axmed Diiriye oo gar darro lagu xiray.